Acrylic Mahwendefa, Acrylic Mirror Sheet, Plastic Mirror Sheet - Donghua
PRODUCTS & MABASA
Bvisa Transparent Perspex Plexiglass Acrylic Sheet
Makara Acrylic Mahwendefa & Makara Plexiglass
Sneeze Varindi & Nhoo
Acrylic Mirror Mapepa
Ruvara Acrylic Mirror
Ona-Thru / Mbiri-Nzira Girazi
Plastiki Mirror Sheet
Art & Dhizaini
Ratidza & Trade Show
Retail & POP Ratidza
ZveMotokari uye Zvekufambisa
DHUA yakavambwa muna 2000 yekupa yakakwira mhando acrylic jira, acrylic girazi jira uye akasiyana epurasitiki magirazi machira.
Unogara uchigadzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro
Iyo anti-fog yekupfeka inoiswa kuna Dhua mhando yepamusoro polycarbonate girazi mukirasi yegumi yakachena. Anti-Mhute girazi rakagadzirwa kuti ridzivirire fogging pasi pemamiriro akaomesesa. Inowanzo shandiswa mukuveura / kugeza magirazi, magirazi emazino, uye sauna, zvehutano kirabhu zvinoshandiswa. Chigadzirwa Zita Anti-fog Mirror, isina Girazi Mirror, Fog Yemahara Magirazi Chinyorwa Polycarbonate (PC) Ruvara Rakajeka Sheet saizi 915 * 1830mm, tsika kucheka-kusvika-saizi Ukobvu 1.0 - 6.0 mm Masking Polyfilm MOQ 50 machira ...
Convex Kudzivirirwa uye Kuchengetedzwa Girazi, Mugwagwa Wemigwagwa Convex Mirror Chigadziko chakavezwa idenderedzwa rinotaridza pamusoro (kana chero chinhu chinoratidza pamusoro chakagadzirwa kuita chikamu chechikamu) umo divi rayo rinoputika rinotarisana nekwaunobva mwenje. Inoratidzira yakafara kona kona pane yakadzikira saizi yekuwedzera munda wekutarisa kubatsira kuwedzera kuoneka munzvimbo dzakasiyana dzekuchengetedza kana kugona kuona uye kuongorora kwekushandisa. DHUA inopa yakanakisa mhando convex magirazi ayo anopa makuru ...
Kubatsirika kubva pakureruka, kukanganisa, kupwanya-kusagadzikana, kusadhura uye kusimba kupfuura girazi, edu eacrylic magirazi machira anogona kushandiswa seimwe nzira kune echinyakare magirazi magirazi ezvizhinji zvekushandisa nemaindasitiri. Kufanana neese maacrylics, edu eacrylic magirazi machira anogona kutemwa nyore, akaboorwa, akaumbwa akagadzirwa uye laser yakamiswa. Magirazi edu egirazi anouya akasiyana mavara, makobvu uye saizi, uye isu tinopa akacheka-kune-saizi girazi sarudzo. Chigadzirwa zita Bvisa acrylic plexiglass girazi ...
Bvisa Plexiglass Acrylic Sheet, Transparent Plastiki Sheet Acrylic, inozivikanwawo sePlexiglass, inonzi thermoplastics uye inowanzo kupihwa mumashizha seyakareruka kana inopwanya-isingagadzirise imwe girazi. Bvisa Acrylic Mapepa anoratidza girazi-senge hunhu - kujekesa, kupenya, uye kujekesa - asi pahafu yehuremu uye kazhinji kacho kukonzeresa kusagadzikana kwegirazi. Izvo zviri nyore kugadzira, zvisungo mushe nema adhesives uye solvents, uye zviri nyore kuita thermoform pasina kurasikirwa kwekujeka kujekesa. Donghua kunyanya ...
Makara Acrylic Mirror Sheets, Ruvara Rakagadzirwa Acrylic Plexiglass Sheet Kubatsirwa kubva pakureruka, kukanganisa, kupwanya-kusagadzikana, kudhura uye kusimba kupfuura girazi, edu eacrylic magirazi machira anogona kushandiswa seimwe nzira kune echinyakare girazi magirazi kune akawanda mashandiro nemaindasitiri. Kufanana neese maacrylics, edu eacrylic magirazi machira anogona kutemwa nyore, akaboorwa, akaumbwa akagadzirwa uye laser yakamiswa. Magirazi edu egirazi anouya akasiyana mavara, makobvu uye saizi, uye isu tinopa akacheka -...
Yakakwira Gloss PETG Mirror Sheet, PETG Plastic Mirror Sheet PETG girazi sheeting ndeye yakanyanyisa kuita mapurasitiki sheeting anowanzo shandiswa muinjiniya, zvipoda, midziyo yekuchengetera, uye zvimwe sezvo iri nyore thermoformed uye kucheka kugadzira zvimiro zvakaomarara zvine ruzivo rwechokwadi. PETG girazi rinopa akasiyana mabhenefiti kubva mukujeka kujekesa, pamusoro gloss chengetedzo, pasina kushushikana kuchenesa, inogamuchira inki nependi, uye iri FDA-inogamuchirwa yekudyidzana kwekudya. PETG Mirror jira rinopa zvakasiyana-siyana nhema ...
Polycarbonate Mirror, PC Mirror, Mirrored Polycarbonate Sheet Sezvinozivikanwa, polycarbonate girazi ndiyo inonyanya kusagadzikana substrate. Yedu polycarbonate (PC) girazi sarudzo yakanaka kana iwe uchida nzvimbo ine miriridzo ine kupisa kukuru kwekudzivirira uye simba rekukanganisa. Mamwe mabhenefiti egirazi redu re polycarbonate akakwirira simba, kugadzikana, kupisa kwakanyanya kupisa, kujekesa kwekristaro uye kudzikama kwemamiriro. Tine 0.25 ~ 6 mm ukobvu, 915 * 1830 mm saizi, yakajeka sirivheri ruvara rinowanikwa ...
Mirror Wall Sticker, Inobviswa Acrylic Magirazi Anonamira DIY Wall Kushongedza Mirror Isiri Girazi Mirror Yekumba Kugara Kamuri Yekurara Yekushongedza Akanaka ekushongedza magirazi dhizaini yako imba kana hofisi ichapa yako imba kutaridzika kutaridzika, gadzira inonakidza mamiriro uye ipe inoshamisa kubata kune yako mukati. Dhua girazi pamadziro chinamira chinogadzirwa chakagadzirwa nepurasitiki acrylic, iyo yepamusoro inoratidzira uye kumashure kune glue pachayo; Pane firimu rekudzivirira pamusoro pegirazi kudzivirira iyo mirro ...
Ndapota Siyai shoko kwatiri uye isu tichava nekuonana mumaawa makumi maviri nemana.
Thermoplastics ndeye yakanakisa svikiro yekutaura uye hunyanzvi. Yedu sarudzo yemhando yepamusoro, yakashongedzwa acrylic sheet uye epurasitiki magirazi zvigadzirwa anobatsira vagadziri kuunza avo ekugadzira zviratidzo kuhupenyu. Isu tinopa akasiyana mavara, makobvu, mapatani, mashizha masheet uye mapolymer mafomu kusangana nezvinodiwa zvisingaverengeke zveunyanzvi uye dhizaini yekushandisa. Isu tinopa hombe sarudzo yeacrylic dhizaini & kugadzira kwevatengesi & mabhizinesi uye kushongedzwa kwemba neakawanda mafor ...
Chigadzirwa Zvidimbu Acrylics mapolymers e methyl methacrylate (PMMA), ane akawanda zvivakwa anobatsira pakuratidzira pane zvekushambadzira zviratidziro kana poindi-yekutenga-kuratidza. Iwo akajeka, akareruka, akaomarara & ane simba-kusagadzikana, inogadziriswa, nyore kugadzira uye nyore kuchenesa. Izvo zvinokwanisika nemaacrylics zvinopfuura kupfuura zvekuratidzira kuratidza. Acrylics isarudzo yakakurumbira yezvimwe zvinhu zvekutengesa senge mannequins, kuratidzwa kwewindo, maraki-akaiswa marack kana masherufu, kutenderera kwematafura ekuratidzira uye chiratidzo ...
Chigadzirwa Midziyo Acrylic yakawana mukuzivikanwa pamusoro pegirazi rekugadzira mumakore achangopfuura nechikonzero chakanaka. ● Inopwanya uye haina huremu, kusiyana negirazi. Hunhu uhwu hunoita kuti acrylic isarudzirwe kune vateveri vanoshanda nevana uye mhuri - kunyanya vacheche. Kurembera furemu ine acrylic pani mune nursery kana imba yekutamba yakachengeteka zvakanyanya kupfuura iyo girazi imwe nzira, sezvo iri shoma mukana wekukuvadza chero munhu kana ikawira. ● Pamusoro pezvo, iyo inopwanya uye yakapepuka ...
Chigadzirwa Midziyo Zvishandiso zvinonyanya kushandiswa pakuvhenekesa maficha ndeacrylic uye polycarbonate. Acrylic plexiglass uye polycarbonate machira ese akasimba uye akasimba epurasitiki machira ane epamusoro-e-iyo-mutsara-anoonekwa mikana. DHUA inonyanya kupa acrylic machira ekuvhenekesa yako application. Yedu yemagetsi giredhi acrylic inoshandiswa kugadzira iyo Chiedza Nongedzo Panel (LGP). LGP inojekesa acrylic pani yakagadzirwa kubva ku100% Mhandara PMMA. Iyo sosi yechiedza yakaiswa pamucheto wayo (s). Inoita iyo l ...
Acrylic ndechimwe chezvinhu zvakajairika zvinoshandiswa kugadzira POP kuratidzira, kunyanya mumaindasitiri akadai sezvekuzora, fashoni uye yepamusoro-tech. Iwo mashiripiti eacrylic acrylic akarara mukukwanisa kwayo kupa mutengi kuoneka kwakazara kwechigadzirwa chiri kutengeswa. Icho chinhu chiri nyore kushanda nacho sezvo ichigona kuumbwa, kutemwa, kuvezwa, kuumbwa uye kunamirwa. Uye Nekuda kwayo kumeso kwepamusoro, acrylic chinhu chakakura chekushandisa nekudhinda kwakananga. Uye Iwe unozogona kuchengetedza ako ekuratidzira e y ...
Signage zvigadzirwa kubva kuDHUA inovhara mabhodhi emabhodhi, mamabhodhi, ezvitoro zvitoro zvikwangwani uye yekufambisa chiteshi kushambadzira kuratidza. Zvakajairika zvigadzirwa zvinosanganisira zvisingaite magetsi, madhijitari emabhodhi, vhidhiyo skrini uye neon zviratidzo. Dhua inonyanya kupa acrylic zvinhu izvo zviripo zvakajairwa, uye cheka-kusvika-saizi machira uye tsika nhema yekushandisa kwemasaini application. An acrylic zviratidzo ipurasitiki jira rine kupenya kupenya. Iyo inouya mumarudzi mazhinji akasiyana anosanganisira echando uye akajeka. Rudzi rwechiratidzo urwu l ...
DHUA inogadzira convex chengetedzo & chengetedzo magirazi, bofu girazi girazi uye ekuongorora magirazi akagadzirwa kubva kune yemhando acrylic girazi jira iri kurema uremu, kupwanya kusagadzikana uye yakajeka yakajeka. DHUA inogadzira magirazi anoshandiswa nenzira yekutengesa, imba yekuchengetera, chipatara, nzvimbo dzeruzhinji, kurodha mateki, matura, matumba ekuchengetedza, nzvimbo dzekugadzira, magaraji ekupaka uye mugwagwa unobva pamigwagwa uye mharadzano. Zvakanakira kushandisa girazi rinotenderera rekuchengetedza uye chengetedzo zvakanyorwa pazasi: Kureruka, ...
Ndeupi Mhando yePurasitiki Magirazi Anogona Kutsiva Magirazi Magirazi Pasina deformation mune yakakura nzvimbo?
Ndeupi Mhando yePurasitiki Magirazi Anogona Kutsiva Magirazi Magirazi Pasina deformation mune yakakura nzvimbo? Chekutanga tinofanirwa kunzwisisa hunhu hweakakosha ezvinhu izvi: 1. Acrylic girazi (Acrylic, Plexiglass, PMMA, Polymethyl Methacrylate) Chakanakira: kujekesa kukuru, girazi kupfeka ...
Musika wePlexiglass Iri Kuwedzera
Iwo Musika wePlexiglass Iri Kuwedzera Plexiglass chinhu chinopisa kamwe kamwe, sezvo kudiwa kwekuparadzaniswa kwenzanga nekudzivirirwa kwawedzera. Izvi zvinoreva kukura kukuru mubhizinesi kune acrylic plexiglass mutengesi. Kumhanyisa kwekufona kwakatanga pakati paKurume. Sezvo denda rekoronavirus rinotsvaira nekukurumidza ...
Maitiro ekuisa Acrylic Mirror Sheet
Maitiro ekuisa Acrylic Mirror Sheet Acrylic girazi jira inogadzira kuwedzera uye kwakanaka kuwedzera kumadziro, madhoo, mapindiro uye nezvimwe, uchiwedzera kubata kwazvino kune chero nzvimbo yaunoisa mukati. girazi uchiri s ...